Kushone isigebengu nephoyisa eFree State | isiZulu
Kushone isigebengu nephoyisa eFree State
Kushone iphoyisa nomsolwa eKZN
Kushone iphoyisa kuqhuma ibhomu eKenya
Kushone iphoyisa engozini eKZN
Bloemfontein - Iphoyisa lidutshulwe labulawa esehlakalweni sokubamba inkunzi esenzeke eKopanong, eBloemfontein, kusho amaphoyisa aseFree State.
Ngokusho kukaCaptain Harry Nagel, uthi iphoyisa elineminyaka engu-41 ubudala, lidubuleke ekhanda.
Abaphangi abane babambe inkunzi isuphamakethe ngezithuba zawo-14:00. Kutheleke amaphoyisa ngesikhathi abaphangi bezama ukubaleka. Kube nokudubulana phakathi kwabo namaphoyisa, kwadubuleka iphoyisa elishonele endaweni yesehlakalo.
Abaphangi bakwaze ukubaleka nemali, i-laptop kanye nesibhamu sephoyisa.
Endaweni engamakhilomitha amabili ukusuka endaweni yesehlakalo, abaphangi bazithele phezu kwamanye amaphoyisa abehamba nenja. Kuqhubeke kwaba nokudubulana, kwadubuleka onyaweni iphoyisa lesifazane, elinye lesilisa ladubuleka esandleni.
Kudubuleke nesigilamkhuba esisodwa sashona, kwaboshwa oyedwa.
Kusaphenywa ngalesi sehlakalo.
Emizuzwini eyi-16 edlule